Kedu otu coronavirus si emetụta ụlọ ọrụ inshọransị? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedu otu coronavirus si emetụta ụlọ ọrụ inshọransị?
Kedu otu nje corona ga-esi emetụta mpaghara mkpuchi mkpuchi
Coronavirus metụtara ọtụtụ akụkụ. Agbanyeghị na isi nri na njem obodo bụ ihe a ma ama karịa, ọtụtụ azụmahịa azụmaahịa metụtara mpaghara ndị a emetụtakwala n'ụzọ na-adịghị mma. Otu n’ime ha bụ ngalaba inshọransị. Agbanyeghi na oria ojoo adighi n’onwunwu nke ahu ike, ndi ulo oru tinye kwara ya dika ihe mmechu aka iji kwado ego ndi ahu ike. Nke a na-atụ anya na ọ ga-emetụta nguzozi nke ụlọ ọrụ na-adịghị mma na ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ. N'otu aka ahụ, mpaghara ndị njem na ihe mkpuchi njem ha na ha bụ ndị ọzọ metụtara. Bülent Eren, osote onye isi Director nke Demir Health na-eche na a ghọtara mkpa mkpuchi ahụike na oge a, na a ga-abawanye mmụba na ire nke iwu nzuzo na mmeju ahụ n'ọdịnihu.
Ọtụtụ ngalaba nọgidere n'ọnọdụ siri ike n'ihi ọrịa coronavirus. Ọ bụ ezie na ndị a kacha mara bụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ọhịa, na-a drinkingụ ihe ọ andụ andụ ma na-eme njem, ọ na-emetụta ọtụtụ azụmahịa na ngalaba ndị metụtara azụmahịa ndị a. Otu n’ime ha bụ ngalaba inshọransị. Agbanyeghị na ngalaba mkpuchi ahụ wepụrụ ọrịa oria na mkpuchi ahụ ike, mmefu ahụike nke ọrịa na-efe efe gụnyere na oge a dịka mmegharị aka iji kwado ego ahụike nke obodo anyị na iji hụ na ndị ịnshọransị echekwa nchekwa. N’igosi na ịkwụ ụgwọ ụlọ a na-akwụ ụgwọ ga-emetụta ego itule ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na enwetabeghi ụgwọ ime ihe maka ọrịa oria, Demir Health Assistant General Manager Bülent Eren kwupụtara na ejirila inshọransị na uru ahịa nke ụlọ ọrụ ndị izizi mezie mpempe akwụkwọ na-esite na mmefu a. ọ bụ.
Inshọransị Ahụike Njem metụtara
Ọbụghị naanị ikike mkpuchi ahụike nke onwe, kamakwa njem mkpuchi ahụike. N'ihi ihe ize ndụ nke ọrịa na-efe efe anyị nọ na ya, ma njem mba na mba na nke ụlọ egbuola oge ma kagbuo ya. Atụmatụ ahụike si mba ofesi abụrụla ngwaahịa kachasị emetụta n'ihi enweghị ndị mba ọzọ si mba ọzọ. N’igosi na n’etu ahia na atumatu ogwu di iche-iche nke mba ozo, onu ahia ohuruwo nke oma n’ihi oke izere nke ndi mmekorita ha na ngalaba niile, Eren kwuru na emeputa ihe ndi mmadu n’enweghi nsogbu na nhazigharị, ma mpaghara ahu nwere akụrụngwa teknụzụ siri ike na-aga nke ọma na ngalaba a. Mmetụta ọzọ na-apụta dị ka igbu oge na nnakọta ego.
N'ịchọpụta na ire ahịa ọhụụ akwụsịla na ngalaba ahụike n'oge a, Eren kwuru na mmeghari mmebi ahụ belatara n'ụfọdụ ngalaba dịka mkpuchi ụgbọ ala, na mwepu iwu iwu. Aghọtakwara mkpa mkpuchi ahụike siri ike n'ihi ọrịa a. Maka nke a, anyị na-eche na a ga-abawanye ụba n'ọchịchọ nke ịzụ ahịa nke iwu nzuzo nke izu ike n'oge ọzọ. ”
Kedu ka nnyeme nke Iranian ga-esi emetụta mpaghara oru nchịkwa?
T1 tramline ga-emetụta okporo ụzọ Bursa
Ihe Marmaray ga-emetụta Markara Earthquake
Ọdụ ụgbọ elu nke atọ na-agba ụgbọ ala mgbazinye ụgbọ ala
Ngalaba Azụmahịa US na-ekpebi ịkwado ụlọ ọrụ ígwè ígwè
3. Ọgba mmiri iji mee ka ụlọ ọrụ dakọtara dị iche iche dị jụụ
Uragbọ okporo ígwè Eurasia 2016 ziri ezi na-ebute World Railway Sector
Ogologo Ogologo Ugo Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo Akuko
Ụgbọ njem na Izmir kpalitere ụlọ ọrụ ụlọ
Eurasia Rail iji mee ka okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè dị na 2 - 4 March 2017
Ọganihu nke na-eme ka e nwee usoro nyocha
Chaos na Iran gbara Logistics Sector!
3. Ọdụ ụgbọ elu ga-eme ka ọrụ ụgbọ elu ikuku Turkey
UTİKAD ga-anọchite anya mpaghara akụrụngwa dị ike karị n'ime ụlọ ahịa
mkpuchi mkpuchi nke onwe
mkpuchi mkpuchi ahụike
Covidien-19 ime Turkey si Nguzogide Against ọrịa
Controlgbọ mmiri Na-achịkwa Seasọ Oké Osimiri ghọrọ Nightmare nke psgbọ mmiri Na-enyocha Ọsọ Ala Izmit
Ụlọ ọrụ Marmaray nke MAPFRE Genel Sigorta nwetara
Marmaray General nọ n'okpuru mkpuchi mkpuchi
Ndi ahia ndi ozo ga-abawanye uzo ugbo elu na uzo ala ahia
Ndị na-eme atụmatụ ime obodo na-adọ aka ná ntị, Osimiri Eurasian, ga-emetụta ihe odide nke akụkọ ihe mere eme